Ambongadiny 440C Stailess vy mpanao hety mpanety mpanamboatra sy mpamatsy | Icool
440C Stailess vy mpanao hety mpanety
Modely ： IC-60-5 ； IC-6030T-5
● Ity hety gunety mpanety matihanina ity dia namboarina manokana ho an'ny mpanao volo, na vao manomboka ary mpampiasa an-trano. Ahitana hety mahitsy 6-inch ary hety 6.0, 30 hety nify 30. Ity hety ity dia afaka mamorona taovolo rehetra tadiavinao.
● Amin'ny fampiasana akora vy tsy misy kalitao avo lenta dia matanjaka sy maranitra ny hety ary avo kokoa ny hery fanapahana.
● Tsy manimba na mizara roa ny tadiny mahitsy amin'ny faritra malama sy mipoitra mipoitra. Ny fanapahana malama dia tsara ho an'ny volo lena na maina. Ny sisin'ny antsy dia nohosorana miloko sy milamina, ny tsipika dia mazava sy malama, ary ny sisin'ny sisin'ny antsy dia manome zoro fanapahana maranitra, izay afaka fohy volo fohy nefa tsy lany.
● Ny hety nify feno dia mandray ny famolavolana nify "V", kely sy madio ny endrika nify, antonony ny haben'ny volo nesorina, ary milamina sy milamina kokoa ny fanapahana.
● Ny visy dia volo volamena fisaka mahazatra miaraka amina vatan-tsoloka manara-penitra. Ny visy fisaka dia ampifanarahana amin'ny fanalahidy fanitsiana mba hanamorana ny fanitsiana ny fihenan'ny hety.
● Ny tahony ahazoana aina dia natao hilazana ireo ergonomika, izay mateza fa tsy reraka. Ny tahony dia mandray ny teknikan'ny sary sokitra mba hahatonga ny fisehoan'ny hety ho tsara tarehy kokoa.
Gunting manapaka volo napetraka
Teo aloha: Hety volom-bolo vita amin'ny hety 6
Manaraka: Hety 4.5 alika saka alika misy torohevitra manodidina ny fiarovana
Hety barety fanamboarana bolo vaovao amin'ny ...
Hety mihety volo miendrika volony volamena ...